किन गर्दैछन् टीकापुरवासी रेशम चौधरी रिहाइको माग ? - Samata Khabar
किन गर्दैछन् टीकापुरवासी रेशम चौधरी रिहाइको माग ?
५ चैत्र २०७७, बिहीबार ०८:५३
कानूनी रूपमा चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन जटिल भए पनि दलका नेताहरूले चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। काठमाडौंमा मात्रै होइन, सांसद चौधरीको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली–१ का बासिन्दा पनि उनलाई रिहाइ गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
टीकापुरका बासिन्दा किन चौधरीको रिहाइको माग गरिरहेका छन्? नेपाली कांग्रेस कैलाली–१ का क्षेत्रीय सभापति भुवनेश्वर अधिकारी भन्छन्, “रेशम चौधरीको मुद्दा कुनै चोरी डाँका तथा गुन्डागर्दीको मुद्दा नभएर विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा हो। थारूहरूले अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको आन्दोलनको क्रममा भएको एक दुर्घटना हो। त्यसैले टीकापुर मुद्दालाई खारेज गरिनुपर्छ।”
थरुहट/थारुवान आन्दोलन चर्किएको वेला टीकापुरमा ७ भदौ २०७२ मा हिंसा भड्किँदा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक मारिएको घटनामा दोषी पाइएपछि रेशम चौधरी जेलमा छन्। घटनालगत्तै फरार रहेका उनी २०७४ मंसीरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली-१ मा अत्यधित मतसहित निर्वाचित भएका थिए।
थरुहट/थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाका जिल्ला संयोजक माधव चौधरी पनि टीकापुर मुद्दाको समाधान निकाल्नुपर्ने बताउँछन्। “रेशमलाई छुटाउन मात्रै नभएर टीकापुर क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि पनि टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्छ र सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ,” टीकापुरको मुद्दासँगै थरुहट/थारूवानका माग पनि सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँदै चौधरी भन्छन्, “कैलालीका जनता सद्भाव चाहन्छन्। शान्ति, सद्भाव र विकास निर्माणका लागि पनि रेशम लगायत टीकापुर घटनाका बन्दीको रिहाइ हुनुपर्छ।”
१९ पुस २०७५ मा सांसदको शपथ लिएपछि रेशम चौधरी।
थारू नागरिक समाजका संयोजक दिलबहादुर चौधरी टीकापुर क्षेत्रमा सद्भाव कायम गर्न पनि मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने बताउँछन्। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाएका मुद्दा फिर्ता लिए जस्तै टीकापुर घटना मुद्दा पनि फिर्ता लिएर सांसद चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने बताउँछन्। संयोजक चौधरी भन्छन्, “विखण्डन ल्याउने, हतियार उठाउने समूहको मुद्दा फिर्ता गर्ने, तर रेशम चौधरीको मुद्दालाई झन् गहिरो बनाउने कार्यले सरकारको नश्लवादी चरित्र देखाउँछ।”
त्यसअघि उनले भारतमै बसेर तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको तर्फबाट कैलाली–१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिए। र, ३४ हजार ३४१ मतसहित निर्वाचित पनि भए। त्यो वेला पनि टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिन माग उठेको थियो। तर, अदालतमा पुगेको मुद्दा फिर्ता भएन। जिल्ला अदालत कैलालीले २२ फागुन २०७५ मा रेशमसहित ११ जनालाई जन्मकैद र १२ जनालाई तीन/तीन वर्षको कैद सजाय सुनायो। त्यस्तै, तीन जनालाई सफाइ दियो। यो अवधिमा जेलमै रहेका थारूसहित १२ जना रिहा भए।
सांसद चौधरीसहित ११ जनाले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध २०७६ फागुनमा उच्च अदालत, दिपायलमा पुनरावेदन गरे। २ पुस २०७७ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले रेशमसहित सात जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनायो भने केहीलाई जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो। उच्च अदालत, दिपायलका निमित्त रजिस्ट्रार सीता रेग्मीका अनुसार, जन्मकैद सजाय पाउनेमा सांसद चौधरीसहित हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी छन्। अन्य चार जनालाई भने पाँच/पाँच वर्षको कैद सुनायो।
कैलाली कारागारमा टीकापुर घटनाका बन्दीहरू।
त्यस्तै, थरुहट नेता थारूको हकमा भने जिल्ला अदालतको फैसला उल्टियो। जिल्ला अदालतको फैसला नमिलेको औल्याउँदै उच्च अदालतले थारूलाई जन्मकैदको सजाय सुनायो। त्यसयता टीकापुर क्षेत्रमा झन् असन्तुष्टि बढेको छ।
आफन्तलाई दुःख परेको वेला सहयोग गर्नुपर्छ भनेर जाँदा आफै‌ दुःखमा परेँ। पक्राउ गर्दा त खासै केही गरेनन्, तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगेपछि खुब कुटे। अहिले पनि शरीर दुख्छ।
मेरो घर टीकापुरबाट २५ किलोमिटर टाढा छ। गाउँकै स्कूलमा राहत कोटाको शिक्षक थिएँ। मेरो जेठो छोरा काठमाडौंमा थियो, कान्छो छोरा टीकापुरमा पढ्थ्यो। त्यो घटना भएको सुनेपछि छोरालाई लिन टीकापुर जाँदै थिएँ, भागाभाग भयो। टीकापुर नपुग्दै फर्किएँ। त्यहीँबाट काठमाडौंमा रहेका छोरालाई फोन गरेर सुनाएँ।
दिउँसो २ बजे पक्राउ गरेका थिए, बाटोभरि कुटपिट गरे। राति १ बजे धनगढी पुर्‍याए। मेरो लामो कपाल र जुँगा थियो, प्रहरीले ती उखेल्थे। कुट्दाकुट्दा मेरो शरीरका कपडा पनि सबै च्यातिएका थिए। खुट्टामा आलपिन ठोके। ‘पानी पानी’ भनेर माग्दा पनि दिएनन्। पानी माग्दा ‘मुख खोल्’ भन्थे, आँ गर्दा मेघाश्री खाएको थुक प्याच्च मुखमा थुक्थे। त्यतिबेल पाएको यातनाका कारण अझै पनि शरीर दुख्छ।
मंगलबार, ३ चैत, २०७७ मा हिमालखबरमा प्रकाशित